Mobile Top-Up .
1. What is topup.com.mm website?
Topup.com.mm သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုနေသာ MPT GSM/WCDMA, MECTel, CDMA 800 Mhz, CDMA 450 Mhz, Ooredoo, Telenor ဖုန်းများသို့ Online မှတဆင့် တိုက်ရိုက် ငွေဖြည့်သွင်းပေးသော Website ဖြစ်ပါသည်။
2. Why error occured in CDMA 800 Mhz and CDMA 450 Mhz mobile types?
CDMA 800 နဲ့ 450 ဖုန်းအမျိုးအစား များတွင် ဖုန်း Bill သုညကျပ်ဖြစ်နေပါက သို့မဟုတ် ဖုန်းBill သက်တမ်း ကုန်ဆုံးနေပါက auto top-up စနစ်ဖြင့်ငွေဖြည့်သွင်း၍ ရမည်မဟုတ်ပေ။
တခါတရံတွင်လည်း အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေမျိုး မဖြစ်နေသော်လည်း MPT Network မှ error တက်နေပါက ငွေဖြည့်သွင်း၍ ရမည်မဟုတ်ပါ။
3. Which type of mobile networks are accepted to recharge the balance?
Topup.com.mm မှ တဆင့် အောက်ဖော်ပြပါ Mobile Network များသို့ ငွေဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- GSM Mobile Network
- WCDMA Mobile Network
- CDMA 800 Mhz Mobile Network
- CDMA 450 Mhz Mobile Network
- Ooredoo Mobile Network
- Telenor Mobile Network
4. Do I need to make 'Account Registration' to buy Top-up Card?
Topup.com.mm ၏ ၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုရန်အတွက် Account Register ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
5. Which type of currencies are accepted in topup.com.mm website?
Topup.com.mm တွင် ၀န်ဆောင်မှုပေးသော Top-up ကဒ်များ အားလုံးအား မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyats) ဖြင့်သာ ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
6. What payment methods can accept?
Topup.com.mm MyanPay Online Payment နှင့် MPU card တို့အား အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
6. What is MyanPay Online Payment System?
MyanPay Online Payment စနစ်နှင့် ပတ်သတ်သော အချက်အလက်များအား ဤနေရာတွင် Click နှိပ်၍ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
7. How to recharge the balance of my mobile phone from this website?
Online Website မှ Top-up ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်အား ဤနေရာတွင် Click နှိပ်၍ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
8. How many times can I recharge my mobile phone from this website?
Topup.com.mm website တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် Mobile ဖုန်းအရေအတွက် အကြိမ်ရေ ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ အကြိမ်ကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဖုန်းတလုံးတည်းကို ဆက်တိုက်ဖြည့်ပါက လေးမိနစ်ခြားမှသာ ဖြည့်လို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
9. I can't use topup.com.mm service and also can't make payment. Why?
Topup.com.mm သည် သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသော၊ မယုံကြည်ရသောသူများ၊ အငြင်းပွားမှုများ မကြာခဏရှိသောသူများအား မှတ်တမ်းတင် ထားရှိပါသည်။ ထိုသူများထံမှ MyanPay Online Payment/MPU card မှတဆင့် ငွေကြေးလက်ခံရယူ၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများအား Topup.com.mm မှ ယာယီအားဖြင့် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် ထိုသူများမှ Topup.com.mm ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
10. I already made payment but I didn't receive recharge amount at my mobile phone. How should I do?
တစ်ခါတစ်ရံတွင် Mobile ဖုန်းလိုင်းများ လိုင်းကျပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ လူကြီးမင်းသည် ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေ၍သော်လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူကြီးမင်း၏ Mobile ဖုန်းသို့ topup.com.mm မှ တိုက်ရိုက် ငွေဖြည့်သွင်း၍ မရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် Mobile Top Up Service သို့ Contact Us မှMail ဖြင့်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် 0932116577 သို့ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်း Complain တင်နိုင်ပါသည်။
11. How do I contact Customer Service?
Topup.com.mm website ၏ Customer Service Team အား ဤနေရာတွင် Click နှိပ်၍ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။